Vinyl flooring kacha mma okomoko pvc plank lvt onye na -emepụta ihe na ụlọ nrụpụta | Iverson
Vinyl flooring okomoko ịkwanyere plank lvt flooring
Ala ụlọ PVC nwere agba dị iche iche, dị ka ọka okwute, ọka ala osisi, wdg. Osisi osisi ọ bụla na -agbaze agba, na mbipụta na ụdịdị na -ahazi iji mepụta ezigbo mkpụrụ osisi na ọdịdị ya. Ọ dabara maka ala dị iche iche, a na -ejikwa ya n'ime ụlọ nwere nnukwu okporo ụzọ, dị ka ime ụlọ, kichin, ime ụlọ ịsa ahụ, ime ụlọ, ụlọ ndị ọbịa ma ọ bụ ọnụ ụzọ na paseeji iji dọta bọọlụ. Enwere ike itinye ya na kọmpụta, taịl nile, vinyl ma ọ bụ osisi, yana njikọta ihe okike nwere ike fesaa ya n'efu. Nye ndụ obi ụtọ ma hapụ nrụgide ozugbo. Ala na-eji nrapado onwe ya, nke enwere ike itinye ya n'ọrụ site n'ịdọka akwụkwọ ntọhapụ. Ala ya dị larịị ma dịkwa larịị na -enweghị aja na uzuzu. Site na mma ịba uru, ị nwere ike belata n'ụzọ aka ike, nye amamihe nke onye nrụpụta egwuregwu zuru oke, wee nweta mmetụta ịchọ mma dị mma; ọ bụ iji mee ka ala gị bụrụ ọrụ nka, na ebe obibi gị ka ọ bụrụ obí nka, jupụta na ụtọ nka.
Isi akụrụngwa maka imepụta ala ụlọ PVC bụ polyvinyl chloride, nke bụ ihe na-eme ka gburugburu ebe obibi dị mma ma na-anaghị egbu egbu, ejirila ya mee ihe ruo ogologo oge. Ebe ọ bụ na ihe ndị mejupụtara ala pVC bụ plastik na calcium carbonate, akwa eriri iko iko dị elu na-eme ka o doo anya nkwụsi ike na nkwụsi ike ya, yabụ na ọ naghị atụ egwu mmiri, ọ bụrụhaala na mmiri araghị ya ogologo oge. emebighị emebi, ọ gaghịkwa adị mildewed n'ihi oke iru mmiri. Gbanwee ma ọ bụ mebie n'okpuru mmetụta okpomọkụ na iru mmiri. N'ime ndụ ndị mmadụ kwa ụbọchị, mmezi nke ala PVC dị ezigbo mma. Ọ bụrụ na ala ahụ ruru unyi, were ncha hichaa ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ ime ka ala ahụ na -enwu gbaa, naanị ihe ị ga -eme bụ ịgbanye ya mgbe niile maka mmezi ya.
Nke gara aga: Akwụkwọ mmado Vinyl Plank nke LVT
Osote: Ihe mkpuchi ala WPC nke PVC rụchara arụpụta
Lvt flooring ịkwanyere Vinyl
Ihe mkpuchi Vinyl Plank Lvt
Akwụkwọ mmado Vinyl Plank nke LVT
LVT flooring Self-adhensive ịkwanyere Plastic Vinyl F ...